Qiyaasta 2019: Kamrooniyiinta iyo u khushuucida Marie - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Qiyaasta 2019: Kamrooniyiinta iyo u hibeynta Maryan
In kasta oo bulshada katoolikka iyo ortodokokraterna ay saacado kooban ku xusayaan geerida hooyada badbaadiyaha, kaamil, gaar ahaaneed gaar ah ayaa lagu arki karaa cibaadada iyo meelaha lagu tukado.
In Ciise by Maryan, ma aha tallaabo la'aan Mary. Xukunkaan ayaa ah caqiidada Mariam Shrine ee Nsimalen, oo u dhow Yaounde. Maryantii bikradda ahayd waxay u muuqan lahayd 13 May 1986 duur yar oo deegaankan ah. Oo ilaa waagaas, goobtu waxay noqotay meel lagu cibaado tago oo xajka ah.
Kow iyo tobankii biloodba, kumanaan Masiixiyiin ah ayaa taga meesha quduuska ah si ay halkaas ugu tukadaan salaad cibaado leh. Waxa ugu sharaf badan, oo rajeynaya inaad ku laabato guriga iyadoo leh xoogaa deeqsinimo ah, ama daawo. Shakilayaashu waxay sugayaan mucjisada la sheegayo ee 33ans inay markale dhacdo.
Bishan Agoosto 14, inteeda badan, haddii aysan ahayn kaniisadaha katooliga oo dhami, habeenku wuxuu u hibeeyo tukashada iyo ka fikirka. Waxay weli yihiin boqolaal caawa caawa, oo u yimid Nsimalen si ay u daryeelaan. Quluubtiina, rajooyinka aaminka ah ee ah in bikradda jannada ay jannada la fuuleyso xanaaqadooda, iyo in ay ugu gudbin doonto Wiilkeeda.
Gaar ahaan Yaoundé, meelaha waaweyn ee fiirsashada waxaa loo hibeeyay Maryantii bikradda ahayd. Tani waa kiiska cathedral "Marwadayada Guusha", basilica yar ee "Maryan boqoradda rasuullada" ee Mvolyé, ama masjidka Maariya ee Nsimalen.
"Waxaa wali jira hadalo la iska malaynayo oo loo maleynaayo, laakiin aniga eraygan aniga waxba kama beddeleyso caqiidadayda. Waan ogahay in Maryantii Barakeysan ee Maryan ay u muuqatay halkaan, in kasta oo mas'uuliyiinta diinta ay wali ka gaabinayaan xaqiijinta. Waxaa iga go'an inaan imaado laba iyo tobankii biloodba mar, iyadoo aan loo eegin caafimaadkeyga. Oo waxaan ogahay in halkan lagu bogsiin doono.
Kuwani waa ereyada Masiixi ah ballanqaad, Mathilde, wuxuu si adag ugu qanciyay badbaadadeeda inay mari doonto Maryan oo ah hooyada Masiixa. Mucjisada Cana wali iyadu waa iyada, waa caddeynta in Wiilku dhageysto waxa hooyadiis u sheegto.
Biyo mucjiso ah
Meesha Maryan ka soo muuqatay waxay ahayd qoyan. Iyaga oo aad u carooday waqtigooda, ayaa daraasiin reer Camerooni ah ay halkaas u tageen oo ay ku maydhan yihiin biyahan, iyagoo rajeynaya in la helo bogsiin. Markhaatifurkuna dhaqso ayuu u raaci jiray.
Marka la eego tirada sii kordheysa ee booqashooyinka, goobtan ayaa loo beddelay barkadda dabbaasha, halkaas oo dadka doonaya ku qubeysan karaan gacanta wadaaddada. Meesha ay xujaydu wax ku cabbeen sidoo kale waa la casriyeeyay. Tobaneeyo tubooyin ayaa hadda u oggolaanaya in ay biyo u soo jiitaan markii la doonaba.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.crtv.cm/2019/08/assomption-2019-les-camerounais-et-la-devotion-a-marie/